Naxariistii shisheeyaha, Kaniisadda Adduunka ee God Switzerland (WKG)
I tusa aniga iyo dalka aad hadda shisheeyaha ka ahay isla wixii aan idin tusay » (Bilowgii 1:21,23).
Sidee waddan kuula dhaqmi karaa shisheeyayaashiisa? Tan ka sii muhiimsanna, sidee ayaan ugu dhaqmi karnaa marka aan waddan shisheeye ah nahay? Sida ku xusan Bilowgii 1, Ibraahim wuxuu ku noolaa Geraar. Wuxuu umuuqdaa mid si wanaagsan loola dhaqmay, in kasta oo khiyaanadii uu Ibraahim ka sameeyey boqorkii Geraar oo ahaa Abimeleg. Ibraahim wuxuu u sheegay xaqiiqada nuskeed ee ku saabsan xaaskiisa Saara inuu iska ilaaliyo in la dilo. Natiijadii waxay noqotay in Abiimeleg uu ku dhowaa inuu Isaga la sino. Habase yeeshee Abimeleg xumaantii shar kuma uu abaal marin, laakiinse Saaridii oo ahayd naagtii Ibraahim wuxuu ku soo celiyey iyadii. Abimelegna wuxuu yidhi, Bal eeg dhulkaygu waa ku hor yaallaaye; ku nool meesha ay indhahaagu ku wanaagsan yihiin! » Sidaasuu Ibraahim boqortooyadii oo dhan ugaga soo dejiyey Ibraahim. Oo isna wuxuu isagii siiyey kun xabbadood oo lacag ah (Aayadda 16).
Muxuu Ibraahim uga jawaabay? Oo wuxuu u duceeyey reerkii Abiimeleg iyo reerkiisii ​​in inkaarla'aanta laga fogaado. Abimelegna weli wuu shakiyey. Malaha wuxuu u arkay Ibraahim inuu yahay awood la tixgelin karo. Markaasaa Abiimeleg wuxuu xusuustay Ibraahim sidii isaga iyo shacabkiisiiba ay ugu sameeyeen wax wanaagsan. Labada nin waxay sameeyeen axdi; waxay rabeen inay dalka ku wada noolaadaan dagaal la’aan iyo nacayb la’aan. Ibraahim wuxuu ogolaaday inuusan mar dambe si musuqmaasuq ah ku shaqeyn doonin. Bilowgii 1:21,23 oo tusi qadarin wanaag.
Waqtiyo badan ka dib, Ciise wuxuu ku yiri Luukos 6,31, "Oo waxaad dooneysaa in dadku ku sameeyaan, sidoo kale yeel!" Kuwanuna waa wixii uu Abiimeleg ku yidhi Ibraahim. Waa kan cashar annaga dhammaanteen ah: haddii aan nahay dadka maxalliga ah ama shisheeyaha ah, waa inaan saaxiibtinimo iyo kalgacayl isweydaarsanaa.
Aabo jacayl ah, fadlan naga caawi inaan had iyo jeer saaxiibtinimo la yeelanno midba midka kale xagga ruuxa. Magaca Ciise Aamiin!